Mindsets that Lose Your Business — Balance Professional Services
လူတစ်ယောက် စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ဖို့ ဆိုတာက ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယ၊ ပါးနပ်မှု၊ ငွေအရင်းအနှီးတွေနဲ့ တင် မရပါဘူး။ သူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။
အခွင့်အရေးတွေအပေါ်၊ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်၊ အရှုံးတွေအပေါ်၊ လူတွေနဲ့ ဘဝအပေါ်မှာ ကိုယ် ဘယ်လို သဘောထားလဲ၊ တုံ့ပြန်လဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီစိတ်နေသဘောထားတွေပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ၊ ပျော်ရွင်မှုတွေ ဖြစ်လာတာပါပဲ။
တစ်ခါတစ်လေကျရင် Negative/ Bad Attitude ( မကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထား )တွေက လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှာ အခြေအနေအချိန်အခါ မတူပဲ အမြစ်တွယ်လာပါတယ်။ တချို့လူတွေကမအောင်မြင်ခင် ၊သူတို့ကိုယ်သူတို့ မအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူး လို့ထင်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီး တချို့လူတွေကတော့ အောင်မြင်ပြီးသား၊ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်စုံပြီးသား ဒါပေမဲ့ အဲဒီအောင်မြင်မှု တွေကပဲ သူတို့ကို ကောင်းတဲ့ Attitude ကနေ မကောင်းတဲ့ Attitude တွေဆီကို တွန်းပို့သလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒါတွေကို လက်တွေ့ မြင်တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုမကောင်းတဲ့ Attitude တွေ ကိုယ့်မှာရှိနေတာ သိလိုက်ပြီဆိုရင် တတ်နိုင်သလောက် ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင် ပိုပြီး သတိထားရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ Attitude တစ်ခုကြောင့် ကိုယ်တင်မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပါ ထိခိုက်လာတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Product က ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း Customer တွေကို မချေမငံ ဆက်ဆံမယ်၊ Customer Service က ညံ့ဖျင်းနေမယ်ဆိုရင် အဲဒီလုပ်ငန်းက ရေရှည်မှာ တည်မြဲနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
စိတ်နေသဘောထားနှင့် အလေ့အကျင့်မကောင်းသော လုပ်ငန်းရှင်များကြောင့် ကံဆိုးရှာသော လုပ်ငန်းတွေ ပျက်စီးသွားတာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်ဖူးတွေ့ဖူး ကြမှာပါ။ အောက်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သတင်း ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ လည်ပတ်မှု ၊ ကြီးထွားနေမှုတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်းတစ်ယောက်အတွက် Bad Attitude (မကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေ) တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) “ ဒါကငါပိုင်တဲ့ လုပ်ငန်း ၊ ငါလုပ်ချင်တာ လုပ်မယ်”
ဒီလိုအတွေးက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းရဲ့ စိတ်ထဲကနေ ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းပစ်ရမယ့် အတွေးပါ။ အရင်ကလည်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဘုရင်က Customer ပါပဲ။ ကိုယ်လဲမဟုတ်ဘူး၊ ဝန်ထမ်းတွေလဲ မဟုတ်ဘူး။ “Customer is always King “ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းက ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနဲ့ သွေးနဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း တည်ထောင်ထားရတာပါ။ ဒီတော့ဒီလုပ်ငန်းမှာ ကိုယ်ကဘုရင် ဖြစ်ချင်တာတော့ မဆန်းပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း လည်ပတ်ချင်သလို လည်ပတ်မယ်။ Product/Service တွေကို ထုတ်ချင်သလို ထုတ်မယ်၊ ပေးချင်သလိုပေးမယ်၊ အဲလိုတွေလုပ်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို ကိုယ်ရဲ့အတ္တ တွေနဲ့လည်း လည်ပတ်လို့ မရပါဘူး။ Customer တွေနဲ့ လည်ပတ်ရမှာ။ Customer တွေက ကိုယ့်ရဲ့ Product/Service တွေကို သုံးတယ် အားပေးတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ကို လေးစားလို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေ အောင်မြင်မှုကို လေးစားလို့၊ ဂါရဝပြုချင်လို့ သုံးတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားပါ။ Customer တွေကိုယ်ရဲ့ Product/Service တွေကို အားပေးတယ်၊ အသုံးပြုတယ်ဆိုတာက သူတို့ရဲ့လိုအပ် ချက်ကို ကိုယ်ကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့ပါ။ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။
(၂) ”No” လို့မပြောနိုင်ခြင်း( ငြင်းဆန်သင့်တဲ့ နေရာ မငြင်းဆိုနိုင်ခြင်း)
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ငြင်းဆိုသင့်တဲ့ အရာ၊ အချိန်ကျရင်ငြင်းဆိုနိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတတ်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုရေးရာဘဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များ များက Customers တွေ Supplier တွေ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းပါတနာတွေကို ဒါမလုပ်နဲ့၊ မရဘူး၊ မပြန်နိုင်ဘူး၊ လျှော့မပေးနိုင်ဘူး စတဲ့ “No”ကို ပြောဖို့က တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ “No”လို့ပြောခြင်းက ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ဥပမာ၊၊ ။ကိုယ့်ကို အကြွေးပေးစရာရှိတဲ့ ဝယ်လက်တစ်ယောက်က ငွေပေးချေတာကို အချိန်တစ်ခုတိုးပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါ အမှန်တကယ်တိုးပေးသင့်တဲ့ အခြေအနေမှာဘဲ လိုက်လျောသင့်ပါတယ်။ တိုးပေးသင့်တဲ့ အခြေအနေဆိုတာက သူကအမြဲကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို အများကြီးအားပေးနေကျသူ အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေပေါ့။ Customer တွေဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် အနည်းဆုံးဈေးနဲ့ လိုချင်ကြတာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေကြုံဖူးမှာပေါ့ သူများတွေဆို ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းတာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Product/Service ကဈေးပို ကြီးတယ်၊ လျှော့ပေးသင့်တယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတွေကို၊ အနည်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့ ဈေးတွေကို ထည့်မတွက်ပဲ Customers အကြိုက်လိုက်လျောပေးလိုက်ရင် ရေရှည်မှာ လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ အချို့ Customer တွေကတော့ သူတို့လိုချင်တဲ့ ရပိုင်ခွင့်ပေါင်းအတန်းလိုက် တောင်းကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ဒီပစ္စည်းလေး အဆစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါလား? ဒါလေးအိမ်ကို အလကားပို့ပေးပါလား? ပစ္စည်းတွေကို အခမဲ့ တပ်ဆင်ခိုင်းတာ၊ Free Service တွေနဲ့ တခြားရသမျှ အခမဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ ရသလောက်တောင်းကြပါတယ်။
တစ်ခုသိထားရမှာက Customer Service ဆိုတာက ကိုယ့်မှာရှိ သမျှတွေ Customer တွေကို အိမ်တိုင်ပါ ချွတ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါဘဲ။ တခါတလေကျရင် လုပ်ငန်းရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာနိုင်အောင်ထိဖြစ်လာရင်တော့ ငြင်းးဆိုနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
(၃) ခေါင်းမာခြင်း (ငါပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်နိုင်ရင် ဂျောင်းတော့)
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ ခေါင်းမာတာ၊ တလမ်းမောင်း၊ တစ်ကြောင်းစွဲတာတွေက လုပ်ငန်းကိုပျက်စီး စေနိုင်ပါတယ်။ တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို သူ့တို့စိတ်ကြိုက်သူတို့ရဲ့ နည်းတစ်နည်းထဲ နဲ့ပဲ လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ Customer တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ၊ လိုချင်တဲ့ အရာတွေကို နားမထောင်ကြပါဘူး ဂရုမစိုက်ကြပါဘူး။ ပြီးတော့ Customer တွေရဲ့ အကြုံပြုချက်တွေကိုလည်း ဥပက္ခာပြုတတ်ကျပါတယ်။
ဥပမာ ။ ။ ကိုယ့်ရဲ့ Product ရဲ့ ထုပ်ပိုးနိုင်တဲ့ ပုံစံကို ပြောင်းလဲဖို့၊ ပိုကောင်း အောင်လုပ်ဖို့ အကြံပေးတာမျိုး၊ ကိုယ်ပေးနိုင်၊ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Service တစ်ခုကို အပိုဆောင်းပေးဖို့ အကြံပြုတာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ခေါင်းမာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ ဒီအကြံပြုချက်တွေကို အာရုံနောက်စရာ၊ စိတ်ညစ်စရာ၊ သူ့တို့ရဲ့လုပ်ငန်း ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်တယ် လို့မြင်ကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မသိလိုက်တာက ဒီအကြုံပြုချက်တွေက သူတို့လုပ်ငန်းအတွက် Golden Opportunity (ရွှေရောင် အခွင့်အလမ်း) ကြီးပါဘဲ။ လုပ်ငန်းတစ်ခု ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာက သူတို့ရဲ့ Customer တွေက စိတ်ကျေနပ်မှ၊ လိုအပ်တာတွေရမှ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။
ဘာမှမလုပ်ခင် အရင် စဉ်းစားတာသုံးသပ်တာက လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်မှာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းပါ။ ဒါပေမဲ့ရလာသမျှ အခွင့်အရေးတိုင်းကို ယူရမလား၊ မယူရဘူးလား တွေဝေနေတာနဲ့တင် အခွင့်အရေးကောင်း တွေ ဆုံးရှုံးရတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ Risk ယူရမှာကြောက်တယ်၊ အလုပ်မဖြစ်မှာကြောက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ သံသယတွေနဲ့ ဒါကတော့ ဖြစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ စသည်ဖြင့် “စစ်မရောက်ခင် မြှားကုန်” နေတာမျိုးက လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
တခါတလေမှာတော့ အလုပ်တစ်ခုကို မလုပ်ကြည့်ခင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ၊ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်လဲ ဆိုတာသိချင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှန်တရားကတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်မကြည့်သေး၊ မလုပ်သေးသရွှေ့ကတော့ သိချင်တာတွေကို ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်ပါဘူး ။
လုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်တယ် မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာက အဲ့ဒါကို စမလုပ်ကြည့်ဘဲ မသိနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ Product ၊ Service တွေကို Social media တွေမှာ ကြော်ငြာရင်ဘယ်လို အကျိုးတွေရနိုင်လည်းဆိုတာ မလုပ်မကြည့်ချင်း လုံးဝမသိနိုင်ပါဘူး။ Marketing မလုပ်ဘဲ၊ ဘာမှမကြိုးစားပဲ Customer တွေက မိုးပေါ်ကကျလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုသာတွေဝေနေမယ်၊ တခုခုဆိုရင် တွန့်ဆုတ်နေမယ်ဆိုရင် ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ ကျော်တက်ခြင်းကို ခံစားရမှာပါ။
(၅) ဆုံးရှုံးမှာ အရမ်းကြောက်ခြင်း
စီးပွာရေးလုပ်တဲ့ နေရာမှာဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရင် ကိုယ်ကငွေကြေး၊ ဂုဏ်သတင်းတွေရမယ်။ လုပ်ငန်းကျဆုံးရင် အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာတွေရနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းဆုံးရှုံးမှာကြောက်တဲ့ သူတွေက လုပ်ငန်းအဆင်မပြေတော့ရင် စီးပွားရေးကျဆင်းလာရင် လိုတာထက်ပိုပြီး အမှားတွေလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာ ။ ။ စီးပွားရေးကြပ်လို့ လုပ်ငန်းအဆင်မပြေတဲ့ အချိန်မှာ ရောင်းအားတွေတက်ဖို့ အတွက်လိုအပ်တဲ့ Marketing တွေကြော်ငြာစရိတ်တွေကို ငွေထက်ကုန်မှာ ကြောက်ပြီး လျှော့ချပစ်တာမျိုးတွေပေါ့။ လက်ရှိအခြေအနေတွေထက် ရောင်းအားတွေကျမသွားအောင် ထိန်းသိမ်းရမဲ့အစား ကိုယ်ကငွေပိုကုန်မှာ ဆုံးမှာ ကြောက်ပြီး လိုအပ်တာတွေ မသုံးရင် ရောင်းအားတွေ ပိုကျပြီး လုပ်ငန်းကို ပိုပြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်
(၆) Over Confidence (ယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်း)
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိခြင်းက လုပ်သမျှ အလုပ်တိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်၊ ကောင်းပါတယ်။ Confidence ရှိခြင်းက အောင်မြင်မှု အတွက်အရေးပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Over Confidence ကတော့ ကိုယ်တိုင်ရော၊ လုပ်ငန်းအတွက်ပါ ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အားနည်းချက် တစ်ခုပါဘဲ။ Over Confidence ဖြစ်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုက ကိုယ်တိုင်တင် မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွက်ပါ အားနည်းချက် တွေကိုမမြင်နိုင်စေပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ ယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီး အကုန်ပြည့်စုံတယ်၊ အားနည်းချက်တွေ မရှိဘူးလို့ထင်နေလို့ပါ။ အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျရင် ကိုယ်ပြင်ဖို့လိုတဲ့ နေရာတွေ၊ အားနည်းနေတဲ့ နေရာတွေကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်က အပျင်းကြီးနေလို့မရပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ဆင်းတဲ့ အချိန်မှာတောင် လိုအပ်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်နေသင့်တာ၊ ပျင်းနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ လုပ်ငန်းက တိုးတက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပျင်းနေရင် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အကြံတွေ၊ အိပ်မက်တွေက စိတ်ထဲမှာဘဲရှိတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ ဘယ်တော့မှ အကောင်အထည်ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အောင်မြင်ချင်ရင် အရင်ဆုံး ပြင်ယူရမဲ့ အရာတွေထဲမှာ ပျင်းတာပါ ပါတယ်။ စစ်မှန်ကြာရှည်တဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုတာက လွယ်လွယ်ကူကူမရတတ်ပါဘူး။ အကြံကောင်း တစ်ခုရှိရုံသာမက ကြိုးလည်းကြိုးစားဖို့ကလိုပါတယ်။ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက ပျင်းတာနဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်က သဘောသဘာဝခြင်း တူညီပါတယ်။ ပျင်းတဲ့သူကလည်း ပျင်းပြီးရင်းပျင်းလာသလို၊ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ သူကလည်းအလုပ်လုပ်ပြီးရင်း လုပ်ချင်ပါပဲ။ နောက်ထပ်ပြောချင်တာက နောက်ပေါက်တဲ့ လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကိုပါ။ သူတို့လက်သုံးစကားရှိတယ် Don't Work Hard, Work Smart ဆိုတာ။ တကယ့်ကို ကိုယ်က Smart ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ အပျင်းကြီးတိုင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်မကြိုးစားချင်တာနဲ့ပဲ Work Smart Work Smart ထိုင်အော်မနေပါနဲ့။ ဆရာကြီး စိုင်းခမ်းလိတ်ပြောသလိုပါပဲ "နတ်စီသော အိပ်မက်လှလှလေးများ လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရနိုင်ပါ"
ခေါင်းမာတာ၊ ပျင်းတာတွေလိုပါပဲ ဒါကလည်း လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် အတွက်ကိုယ်တိုင် အတွက်ရော လုပ်ငန်းအတွက်ပါ ဘယ်လိုမှ မကောင်းတဲ့ Attitude တွေပါ။ လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်အရာကိုမှ လစ်လျူရှုလို့ မရပါဘူး။ ဖြစ်လာနိုင် သမျှအရာတွေ၊ ရွေးချယ်လို့ရသမျှတွေ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့ အဆင့်တိုင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပြီးပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေက သိပ်ပြီး Plan လုပ်မထားကျပါဘူး၊ လိုအပ်တယ်လို့လည်း မထင်ပါဘူး။ သူ့တို့က Business Plan၊ Budget Plan၊ Financial Plan စတာတွေ လုပ်မထားမိရင် အခက်အခဲ (သို့) ပြဿနာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါ ပြူးပြာပြီး ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိဖြစ်ကျပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်ကျရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုဘဲထိခိုက်မှာပါ။ ခေါင်းမာတတ်လို့ဘဲ တစ်ခါတလေ သူများပေးတဲ့ အကြံ ဉာဏ်တွေကို လျစ်လျှူရှု့မိတတ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း တခါတရံကျရင် အရမ်းကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်မလိုချင်လို့ စွန့်ပစ်လိုက် သလိုပါဘဲ။
အချုပ်အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးထွားအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာက ကိုယ်တိုင်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား Attitude တွေကိုအရင်ပြင်ရပါမယ်။ စီးပွားရေး ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ပြောင်းလဲလာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ အလိုက်သင့်ဖြစ် အောင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး Product ၊ Service အသစ်တွေပေးနိုင်အောင်၊ Customer တွေကို ပိုပြီး စိတ်ကျေနပ် အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျရှုံးခြင်းကို သတ်မှတ်ပေးတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Attitude ပါပဲ။ အချိန်ပေးဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။